गाउँका विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आसै छैन, पशुचौपाय चराउँदै बित्छ दिन ! – नेपाली संगसार
गाउँका विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आसै छैन, पशुचौपाय चराउँदै बित्छ दिन !
नेपाली संगसार calendar_today ३ जेष्ठ २०७८, 8:15 am
जाजरकोट । नलगाड नगरपालिका–८ की लक्ष्मी केसीको दैनिक बिहान, बेलुकी बाख्रालाई चरिचरण क्षेत्रमा लिने र ल्याउँदैमा दिन बित्छ। उनी अहिले कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी हुन्।